လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: မြန်မာအမျိုးသား - စုံတွဲ သဲသောင်ပြင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းခံရခြင်း
မြန်မာအမျိုးသား - စုံတွဲ သဲသောင်ပြင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းခံရခြင်း
မြန်မာအမျိုးသားအရောင်းသမားတစ်ဦးသည် တရားရုံး၌ လူမြင်ကွင်းတွင် အမြင်မတော်အောင် လိင်ဆက်ဆံမှု ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး Jumeirah ကမ်းခြေတွင် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးသမီးနှင့် လိင်ဆက်ဆံရာ၌ မည်သူမျှ မကြည့်ခဲ့ဟု ဆိုပါသည်။ မှတ်တမ်းများအရ ၂၆နှစ်အရွယ် မြန်မာလူမျိုး အရောင်းသမားသည် သောင်ပြင်တွင် မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသက်(၂၀)အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးအရောင်းသမားနှင့် လိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့က တရားသူကြီး Adnan Al Farra ရုံးထိုင်သည့် Dubai အယူခံဝင်ခုံရုံးတွင် ပစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရေးအတွက် ၎င်းတို့အတွဲမှ အသနားခံစာ တင်ထားပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးအရောင်းသမားမှ ပြောကြားသည်မှာ - ၎င်းသည် အရက်သေစာသောက်စားပြီးနောက် အမျိုးသမီး အရောင်းသမားနှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပြည်သူများအမြင်တွင် မဖွယ်မရာပြုမူခဲ့ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ မိမိတို့နှစ်ဦးကို မည်သူမျှ စောင့်ကြည့်ခြင်း မရှိကြောင်းဖြင့် စောဒက တက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအရောင်းသမားမှ ပြောကြားရာ၌ သူမ အမူးလွန်သွားသည့်အတွက် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အများအမြင်တွင် သင့်တယ်မှုမရှိအောင် မပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း ဆိုပါသည်။
ပြည်သူများအသုံးပြုသည့် Jumeirah ကမ်းခြေတွင် ပြည်သူများအမြင်တွင် မတင့်တယ်ပြုလုပ်ခဲ့မှုအတွက် တရားစွဲခြင်းခံရသော အမှုဖြစ်ပါသည်။ အစောပိုင်းတွင် Dubai တရားရုံးမှ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို အများအမြင်တွင် မတင့်တယ်ဖွယ်ရာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုအတွက် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆက်တွဲတစ်လအဖြစ် အရက်သေစာ သုံးစွဲမှုအတွက် ချမှတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စုံတွဲနှစ်ဦးသည် မိမိတို့၏ ပြစ်ဒဏ်များ ကျခံပြီးပါက တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသနားခံစာ တင်သွင်းပါသည်။ ယခုအမှုမှာ ဒုတိယအမှုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ရပါသည်။ ပထမအမှုမှာ ယခင်နွေရာသီတွင် ဗြိတိသျှစုံတွဲနှစ်ဦးသည် သောင်ပြင်တွင် အရက်သေစာ သောက်စားပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်စဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်(၃)လ ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
Source -Gulf News
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, March 09, 2009
ရက်စက်တယ်ဗျာ၊ ယုံတောင်မယုံနိုင်စရာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု၊ အင်း.....။ ရွှေမြန်မာ... ရွှေမြန်မာ... :(
March 10, 2009 at 12:49:00 AM GMT+6:30
;) သူများအိမ်သွားနေပြီး အနေထိုင်ကလဲမတတ်ကြ ဘယ်အိမ်ရှင်ကလက်ခံမှာလဲ။ စင်ကာပူမှာလဲကြည့်နေတယ်။ အထိန်မရှိလို့လား ဘာလားမသိ ရထားတွေပေါ်မှာ အရမ်းနမ်းနေပြီဆို အဲဒါဗမာအတွဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေလို့။ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာကိုအပြစ်တင်ရမလဲ လဲမသိပါ။
March 10, 2009 at 1:10:00 AM GMT+6:30
ကိုလင်းဦးပြောတဲ့ အရောင်းသမား ဆိုတာ အရောင်းစာရေးလား? ဘာကိုဆိုလိုမှန်း ကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက် ဖြေကြားပေးပါ
March 10, 2009 at 5:34:00 AM GMT+6:30
wino >> ဟုတ်ကဲ့.... ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သတင်းများကို ဘာသာပြန်၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Source ကိုလည်း လိုက်ရှာပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာအမျိုးသား အရောင်းသမားတစ်ဦးလို့ပဲ ပြောထားပါတယ်။ ဘယ်က ဘာအရောင်းသမားဆိုတာ မရှင်းပြထားပါဘူး။ ကျွန်တော် သတင်းယူရာ Source ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သွားရောက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
March 10, 2009 at 8:35:00 AM GMT+6:30
အိုး တော်တော်ပွင့်လင်းကြတာပဲ.ကိုခိုင်စိုးလမ် ပြောသလို မြန်မာနမ်းတာ မတွေ့သေးဘူးဗျာ..
March 10, 2009 at 9:53:00 AM GMT+6:30
ကိုညီမောင်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုလင်းဦးက သတင်းထူးပေးလို့ နောက်ဆို ဒီမှာလဲ ကမ်းခြေသွားရင် မျက်စိပွင့် နားစွင့်သွားပါ့မယ် :D
March 10, 2009 at 11:01:00 AM GMT+6:30
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ။ East Coast ရောက်ရင် လိုက်လံ သတိထားလိုက်ပါ့မယ်။ :)
March 10, 2009 at 4:50:00 PM GMT+6:30
" ခေတ်မီတာကိုလက်ခံပါတယ် ခေတ်လွန်တာကိုတော့ အခုထိလက်ခံလို့မရသေးလို့ ဒီလိုအဖြစ်တွေကိုစိတ်ပျက်မိပါတယ်....... "
March 10, 2009 at 5:17:00 PM GMT+6:30
ကိုလင်းဦးရေ... ကျွန်တော်လည်း သတင်းစာကို အဆင်ပြေသလို Scanning လုပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်တာ။ အဲဒီနေ့က ဒူဘိုင်းမှာလည်း အရမ်းနံမည်ကြီးသွားတယ်။ www.gulfnews.com မှာတော့ မကြည့်မိဘူး။ အဲဒီနေ့ 6. March နဲ့သတင်းကို ပြန်ရှာလို့တွေ့ရင် Link ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
March 10, 2009 at 8:57:00 PM GMT+6:30
ဟူးလို့မှတ်ချက်ပေးသွားတယ် နည်းနည်းတော့ ဆင်ခြင်သင့်တယ်
March 10, 2009 at 9:39:00 PM GMT+6:30
ရော်... နဂိုကမှ... ဟူး..... အဲဒီ ဆပ်စလူးထစုံတွဲက အိမ်များမရှိကြဘူးလားမသိ... ခေတ်မှီလွန်တော့ တရားတောင်စွဲခံရတယ်... စလုံးကလူတွေကလည်း east coast မှာဆို မှောင်ရင် လျှောက်မကြည့်ကြနဲ့ ဟဲဟဲ...
March 11, 2009 at 6:10:00 PM GMT+6:30
မလွယ်ရေးချ ငသတ် မလွယ်ပါလားကွယ်
March 11, 2009 at 6:16:00 PM GMT+6:30
EastCost သွားချောင်းဦးမှ ရှိချင်ရှိနိုင်တယ်
နာမည်ကြီးလို ကြီးညားလူတွေ ရှိချင်ရှိမှာ း)
March 11, 2009 at 9:03:00 PM GMT+6:30
အခုတလော... မြန်မာပြည်က စုံတွဲတွေလည်း...ပိုကဲလာကြသလိုပဲဗျ။ အီး... နာလိုလို့ ပြောတာဟုတ်ဘူးနော်...
March 11, 2009 at 11:30:00 PM GMT+6:30
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ဟာ အယဉ်အကျေးဆုံး တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေး က ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ကို တရွှေ့2 ဝေးလွှင့်ထွက်ခွာသွားပြီလို့ ခံစားမိပါတယ်။ အတော်ဆိုးတယ်။ မြန်မာတွေ ခေတ်ရှေ့ပြေးရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ လိုက်မီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှန်တယ်နော်။ ဒါမျိုးဆို အတုခိုးတော်တယ်။ ကောင်းရော ။
March 12, 2009 at 3:59:00 PM GMT+6:30
ရွှေတွေ ရွှေတွေ ခက်တော့ ခက်နေပြီကွယ်
March 13, 2009 at 11:55:00 PM GMT+6:30
နဂိုကတည်းက မြန်မာဆိုရင် ခေါင်းငုံ့ကြည့်ချင်တ ဲ့သူတွေကရှိနေတာကို နည်းနည်းလေးအနေအထိုင် မဆင်ခြင်ကြဘူး။ စိတ်ညစ်တယ်။
March 14, 2009 at 10:08:00 AM GMT+6:30
He is painting in black and spraying glossy effect to that black paint again to make more shinny to Myanmar. I was absolutely upset for what he did. Don't havearoom for that?
March 15, 2009 at 9:43:00 AM GMT+6:30
အရောင်းဝန်ထမ်းပါ ။ Dubai International Airport မှာ ရှိတဲ့ Dubai Duty Free ဆိုင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်
March 28, 2009 at 2:36:00 PM GMT+6:30
အခုလို လာပြောတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေးဆပ်သူရေ....
March 29, 2009 at 10:14:00 AM GMT+6:30